နေရောင်ခြည်သည်ကာဗွန် Squeegee - တရုတ် ChangZhou Plet ပုံနှိပ်
ဂျပန် NEWLONG Squeegee ဖိအား Balance စမ်းသပ်သူ
cell ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုက်ရိုက်ပုံနှိပ် core ကိုပုံနှိပ်ပြီးနောက်ငွေငါးပိ၏အချိုးသည်ဘက်ထရီ၏ပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှုကိုထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်သည့်အခါ screen ကိုပုံနှိပ်ခြင်း၏မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များကို၏ပြင်ဆင်မှုရုံဆယ်နှစ်, မျက်နှာပြင်, ငွေငါးပိနှင့် squeegee တံခါးဝလိုင်းလိုအပ်ချက်များကို ပို. ပို. ချော, ဆန်းသစ်ထားရပါမည်, လက်ရှိ 30um သို့ကနဦး 60um ကနေဖြစ်တော်မူပြီ ပြသဗေလအဖြစ် (ထို squeegee အစားထိုးခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် ...
cell ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုက်ရိုက်ပုံနှိပ် core ကိုပုံနှိပ်ပြီးနောက်ငွေငါးပိ၏အချိုးသည်ဘက်ထရီ၏ပြောင်းလဲခြင်းထိရောက်မှုကိုထိခိုက်ပါလိမ့်မယ်။ သည့်အခါ screen ကိုပုံနှိပ်ခြင်း၏မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များကို၏ပြင်ဆင်မှုထို့ကြောင့်မျက်နှာပြင်, ငွေငါးပိနှင့် squeegee, ဆန်းသစ်ထားရမည်ဖြစ်သည်
ရုံဆယ်နှစ်, မြို့တံခါးဝလိုင်းလိုအပ်ချက်များကို ပို. ပို. ချော, လက်ရှိ 30um သို့ကနဦး 60um ကနေဖြစ်တော်မူပြီ ယခု SPS-as-SL ပို. ပို. လူကြိုက်များသည် squeegee အစားထိုး (အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း), နေဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်!
SPS-as-SL ရဲ့ core အားသာချက်နေသောခေါင်းစဉ်:
1, အစွန်း type ကိုဖြတ်တောက်ခြင်း
အစွန်းပိုမိုချောမွေ့ပိုပြီးချွန်ထက်, 30um များအတွက်သင့်လျော်သောနှင့်လိုင်းပုံနှိပ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော
3, စူပါ wear-ခံနိုင်ရည် polyurethane
ထက် ပို. 60,000 ပုံနှိပ်တစ်ခုမှာအစွန်း
: စက်အမျိုးအစားများများအတွက် Maxwell (တရုတ်), Baccini (အီတလီ), dek (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း), Folungwin (တရုတ်)
ပေး Squeegee စိတ်ကြိုက်န်ဆောင်မှုများ
ယခင်: Short Lead Time for 3m Soft Squeegee - screen-printing-squeegee-M – PLET
နောက်တစ်ခု: ဖိုင်ဘာဖန်ဘုတ်အဖွဲ့ Squeegee
အလိုအလျောက် Squeegee ကွိစက်
စျေးပေါတဲ့ Squeegee သည်နေရောင်ခြည်ပုံနှိပ်
Flexo ပုံနှိပ် ရော်ဘာ
Groove Edge ပိုးပုံနှိပ် Squeegee
High Quality Polyurethane ပုံနှိပ် Squeegee
High Quality Squeegee Blade ကို
နေရောင်ခြည် Panel ကိုများအတွက်အနိမျ့စျေး Squeegee
နယူးစတိုင် Squeegees သည်ကိုငျတှယျ
နယူးစတိုင် Squeegee နေရောင်ခြည်ပုံနှိပ်
ဓာတ်ပုံ V ကို olatic PV ပုံနှိပ်
Polyurethane Squeegee Blade ကို Roll
ရောင်းရန်တွင်ပုံနှိပ် Squeegee Urethane
နေရောင်ခြည် Panel ကိုများအတွက်ပုံနှိပ် Squeegees
ပုံနှိပ် Squeegees ရော်ဘာ
ပူး Polyurethane Squeegee
PV ရော်ဘာ Squeegee
ရော်ဘာပရင်တာ 2018 Squeegee သည်နေရောင်ခြည်
ပိုးပုံနှိပ် Squeegee အတူ Groove Edge
နေရောင်ခြည် Glass ကို Panel များ Squeegee
နေရောင်ခြည် Panel ကိုပုံနှိပ်ရော်ဘာ
နေရောင်ခြည် Panel ကို Squeegee
နေရောင်ခြည် Panel များရောင်းရန် Squeegee
နေရောင်ခြည် PV Squeegee Print
နေရောင်ခြည် Tool ကို Squeegee
နေရောင်ခြည် Volatic PV ပုံနှိပ် Squeegee
Squeegee Blade ကို
PV သည် Squeegee ပုံနှိပ်
ကြွေပုံနှိပ်သည် Squeegee ရော်ဘာ
Squeegee ရော်ဘာ Roll
Squeegee ရော်ဘာ sucker
အမြင့် solvent နေရောင်ခြည်နှင့်အတူ Squeegees
Urethane Squeegee Blade ကို
ဗီနိုင်းထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင် Tool ကို
ChangZhou Plet ပုံနှိပ်နည်းပညာ CO, .LTD ။